Iformula yekhava yentsimbi. CKTaylor
Ukusabalalisa okuqhelekileyo, eyaziwa ngokuba yi- curve yebell kwenzeka kuwo onke amanani. Eyona nto ingenakuchaza ukuba "i-curve" yebell kule ngxaki, njengoko kunenani elingapheliyo leentlobo zee curve.
Ngasentla yimihlathi engasetyenziselwa ukubonisa nayiphi na ikharve yentsimbi njengomsebenzi we x . Kukho iinkalo ezininzi zefomula ekufuneka ichazwe ngokubanzi. Sijonge nganye kwezi zinto kulandelayo.
Kukho inani elingenamkhawulo lonikezelo oluqhelekileyo. Ukusabalalisa okuqhelekileyo kunqunywe ngokupheleleyo yintetho kunye nokuphambuka okuqhelekileyo kokusasazwa kwethu.
Intetho yesabelo sethu ibonakaliswe kwimeko encinane yesiGrike incwadi. Oku kubhaliwe μ. Oku kuthetha ukubhekisela kwiziko lethu lokusabalalisa.
Ngenxa yobukho besikwere kwindawo ebonakalayo, sinomlinganiso ohambelana nomgca wecala x = μ.
Ukuphambuka okusemgangathweni kokusabalalisa kwethu kubonakaliswe kwimeko encinane yesiGrike isigma. Oku kubhaliwe njenge-σ. Ixabiso lentlukiselo yethu ehambelana nokusabalala kokusabalala kwethu. Njengexabiso le-σ ukwanda, ukusabalalisa okuqhelekileyo kuya kufakwa. Ngokukodwa ukuphakanyiswa kokusabalalisa akukona okuphakamileyo, kwaye imisila yokusabalalisa iyanda.
Incwadi yesiGrike i-π i- pi eqhubekayo yeemathematika . Le nombolo ayinangqiqo kwaye idlula. Inokunyusa okungekho okungapheliyo kwandisa. Ukwandiswa kwesiqingatha kuqala ngo-3.14159. Inkcazo ye-pi ibhekana nayo kwijometri. Nantsi sifunda ukuba i-pi ichazwa njengomlinganiselo phakathi kwesangqa sesangqa ukuya kumgama wayo. Kungakhathaliseki ukuba sisiphi isangqa esiyakhayo, ukubalwa kwesi sixa sinika inani elifanayo.
Incwadi e ibonisa enye imathematika rhoqo . Ixabiso lale nto lihlala lingama-2.71828, kwaye lungekho nangengqiqo kunye ne-transcendental. Olu qho laqala ukufunyanwa xa sifunda inzala eyenziwa ngokuqhubekayo.
Kukho uphawu olungalunganga kwizinto ezibonakalayo, kunye neminye imiqathango kwi-sponent is square. Oku kuthetha ukuba i-exponent isoloko ingenasiphelo. Ngenxa yoko, lo msebenzi uyona msebenzi onyukayo kubo bonke abangaphantsi kweethetha μ. Umsebenzi uyancipha kuwo wonke ama- x angaphezulu kwe-μ.
Kukhona i-asymptote engqameneyo ehambelana nomgca ojikelezayo y = 0. Oku kuthetha ukuba igrafu yomsebenzi awuzange isichukumise i-axis kunye ne-zero. Nangona kunjalo, igrafu yomsebenzi ifika ngokukhawuleza ngokusondeleyo kwi-x-axis.
Ixesha leengcambu zenkcazo likhoyo ukuze kulungelelaniswe ifomu yethu. Eli gama lithetha ukuba xa sidibanisa umsebenzi ukufumana indawo phantsi kwekhava, yonke indawo phantsi kwekharityhulam yi-1. Le xabiso kwibala elipheleleyo lilingana ne-100%.
Le fomula isetyenziselwa ukubala iziganeko ezinxulumene nokuhanjiswa okuqhelekileyo. Kunokuba sisebenzise le fomula ukubala izi zizathu ngokuthe ngqo, sinokusebenzisa itafile yexabiso ukuze senze izibalo.
Itheyibhile yokuHlala yoLuntu oluqhelekileyo
Umda weNkohlakalo I-Formula yabemi abaLuntu
Imigaqo yoKongeza kwiNgxaki
Ukuqonda iNdlu yeNdlu
Isigaba seBheyili yoLwaphulo-mthetho
Uluhlu lwe-Great Muslim Baby Girl Names ukusuka kwi-A ukuya kwi-Z
Iingcebiso zePainting: Udwebo oManzi oManzi
I-Scam: I-Video Isexwayiso Nge-Shampoo
IsiFrentshi IsiGama esihambelana neSoka kunye neNdebe yeHlabathi
Iincwadi Eziphezulu Ngezulu